Yingani kuthiwa abefundisi bezenkolo nabadala bonke bahamba umgudu wobuFarisi? Yini umongo wabo? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-04-08 16:53:49 65
“Futhi waqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi. Umuntu othile watshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi wemba isikhamo, wase akha isiqongo sokulinda, wabe esesiqashisa kubalimi, wase eya ezweni elikude. Futhi ngenkathi efanele wayesethuma inceku kubalimi, ukuba ithathe kubalimi izithelo zesivini. Bayibamba, futhi bayishaya, base beyimukisa ze. Waphinda futhi wathumela kubo enye inceku; futhi yona bayikhanda ngamatshe, futhi bayilimaza ekhanda, futhi bayithuka bayixosha beyiphathe ngokuyihlazo. Waphinda futhi wathumela enye; futhi yona bayibulala, nezinye eziningi; ezinye bazishaya, futhi ezinye bazibulala. Khona-ke kwase kusele indodana eyodwa, indodana yakhe ethandekayo, nayo wayithumela kubo ekugcineni, ethi, Bayakuyihlonipha indodana yami. Kodwa labo balimi bakhuluma bodwa bathi, Lo uyindlalifa; wozani, siyibulale, futhi ifa libe ngelethu. Base beyibamba, futhi bayibulala, futhi bayiphonsa ngaphandle kwesivini. Khona-ke uzokwenzani umninisivini na? uzokuza futhi abhubhise abalimi, bese esinika abanye isivini” (UMarku 12:1-9).
“Maye kinina, babhali nabaFarisi, bazenzisi! … Zinyoka, nzalo yamabululu, niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na?” (UMathewu 23:29-33).
Abanye abantu bathanda ukubukwa. Ngenkathi kukhona abafowabo nodadewabo, bathi bayambonga uNkulunkulu, kodwa uma bengaboni, abalenzi iqiniso futhi benza ngendlela ephambene ngokuphelele. Ingabe abayibo abaFarisi benkolo? Umuntu omthanda ngokweqiniso uNkulunkulu futhi oneqiniso yilowo othembekile kuNkulunkulu, kodwa engakwembuli obala lokho. Uzimisele ngokwenza iqiniso lapho kuvela izinkinga futhi angakhulumi noma enze ngendlela ephambana nonembeza wakhe. Ukhombisa ukuhlakanipha lapho izinkinga zivela futhi ubambelele emgomweni ngezenzo zakhe, noma ngabe izimo zinjani. Umuntu onjengalona osebenza ngeqiniso. Kunabanye abakhuluma ngezindebe zomlomo ngokumbonga kwabo uNkulunkulu. Bachitha izinsuku zabo bebuthe izinhlonze ngokukhathazeka, babe nesimo sokuzenzisa futhi benze sengathi banobuso obunosizi. Kwaze kwenyanyeka! Uma nje ubungambuza, “Iziphi izindlela ombonga ngazo uNkulunkulu? Ngicela ungitshele!” ubeyophelelwa ngamagama. Uma uthembekile kuNkulunkulu, ungakhulumi ngakho esidlangaleni, kodwa sebenzisa izenzo zakho zoqobo ukukhombisa uthando lwakho ngoNkulunkulu, futhi ukhuleke Kuye ngenhliziyo eneqiniso. Labo abasebenzisa amazwi kuphela ukuze babhekane noNkulunkulu bonke bangabazenzisi! Abanye bakhuluma ngokumbonga uNkulunkulu ngomkhuleko ngamunye, bese futhi beqala ukukhala ngaso sonke isikhathi lapho bethandaza, ngisho ngaphandle kokuqhutshwa nguMoya oNgcwele. Abantu abanjengalaba bangenwe amasiko nemicabango yenkolo; baphila ngalawo masiko nemicabango enjalo, bahlale bekholwa ukuthi izenzo ezinjalo ziyamjabulisa uNkulunkulu, nokuthi ubungcwele bokuzenzela noma izinyembezi zokuzidabukisa ziyilokho uNkulunkulu akufunayo. Ingabe yikuphi okuhle okungaqhamuka kulaba abangasile? Ukuze bakhombise ukuthobeka kwabo, abanye babo benza sengathi banomusa uma bekhuluma kukhona abanye. Abanye bayazithoba ngamabomu uma kukhona abanye, njengezinyane lemvu elingenamandla nhlobo. …
Njalo lapho labo bantu benkolo behlangana, bayabuza, “Dadewethu, unjani kulezi zinsuku?” Yena aphendule, “Ngizizwa nginokumbonga uNkulunkulu nokuthi angikwazi ukufeza isifiso senhliziyo Yakhe.” Omunye athi, “Nami, futhi, ngiyambonga uNkulunkulu futhi angikwazi ukumgculisa.” Le misho embalwa namazwi kodwa kukhombisa izinto ezimbi ezisekujuleni phakathi ezinhliziyweni zabo. Amazwi anjalo ayenyanyeka futhi awanambitheki ngokwedlulele. Imvelo yalaba bantu iphikisana noNkulunkulu.
Kucashunwe “Ukukholwa KuNkulunkulu Kumele Kugxile Eqinisweni, Hhayi Emasikweni Enkolo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ukhonza uNkulunkulu ngesimo sakho esingokwemvelo, nangokuhambisana nezinto ozithandayo; ngaphezu kwalokho, ulokhu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ujabulela noma yini ofuna ukuyenza, nokuthi uzonda noma yini ongafuni ukuyenza, futhi uqondiswa ngokuphelele yizinto ozithandayo emsebenzini wakho. Ingabe lokhu kungabizwa ngokukhonza uNkulunkulu? Ekugcineni, isimo sempilo yakho ngeke sishintshwe nakancane; kunalokho, uyoba nenkani ngisho nakakhulu ngoba ubukhonza uNkulunkulu, futhi lokhu kuyokwenza ukuthi isimo sakho esonakele sibe nzima nakakhulu. Ngale ndlela, ngaphakathi uzozakhela imithetho yokukhonza uNkulunkulu ngokuyinhloko esekelwe ebuntwini bakho, nasolwazini oluthole ngenxa yokukhonza ngokuvumelana nesimo sakho. Lokhu kuyisifundo esivela olwazini lwabantu. Kuwumbono womuntu ngokuphila. Abantu abanjengalaba bafana nabaFarisi kanye nabaholi benkolo. Uma bengavuki emaqandeni baphenduke, bazogcina bephenduke oKristu bamanga abazovumbuka ezinsukwini zokugcina futhi badukise abantu. OKristu bamanga nabakhohlisi okwakuthiwe bayovela kulolu hlobo lomuntu. Uma labo abakhonza uNkulunkulu belandela ubuntu babo futhi benze ukuthanda kwabo, khona-ke basengozini enkulu yokulaxazwa nganoma yisiphi isikhathi. Labo abasebenzisa ulwazi lwabo lweminyaka eminingi bekhonza uNkulunkulu ukuze bazuze izinhliziyo zabanye, ukubashumayeza nokubavimba, nokubeya—futhi abangakaze baphenduke, bavume izono zabo, bayeke ukuqhakambisa izinzuzo zesikhundla—laba bantu bayowa phambi kukaNkulunkulu. Bangabantu abawuhlobo olulodwa noPawulu, bazidla ngezikhundla zabo eziphezulu futhi babukise ngezimfanelo zabo. UNkulunkulu ngeke alethe abantu abanjena ekuphelelisweni. Lolu hlobo lwenkonzo lugxambukela emsebenzini kaNkulunkulu.
Kucashunwe “Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Buka abaholi bawo wonke amahlelo. Bonke banenkani, bazenza osiyazi, bachaza iBhayibheli ngaphandle komongo walo nangokwemicabango yabo. Bonke bancike eziphweni nasolwazini olunzulu ukuze benze umsebenzi wabo. Ukube akukho ababekwazi ukukushumayela, ingabe labo bantu bebeyobalandela? Ngemva kwakho konke, kukhona abakufundayo, futhi kuncane abangakusho ngemfundiso, noma ukwazi indlela yokunqoba abanye nendlela yokusebenzisa obunye ubuqili, abalethe ngakho abantu phambi kwabo futhi babakhohlisa. Ngokulindelekile, labo bantu bakholwa kuNkulunkulu—kodwa eqinisweni balandela abaholi babo. Uma behlangana nalabo abashumayela indlela yeqiniso, abanye kubo bayothi, “Kudingeka sixhumane naye ngokukholwa kwethu kuNkulunkulu.” Badinga imvume yomuntu othile ukuze bakholwe kuNkulunkulu; akuyona yini inkinga leyo? Baphenduke ini labo baholi? Ingabe abakabi yini abaFarisi, abelusi bamanga, abaphikikrestu, nezikhubekiso ekwamukeleni kwabantu indlela yeqiniso?
Kucashunwe “Ukufuna Iqiniso Kuphela Okuwukukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu
Injongo yokubonakala kukaNkulunkulu ngaphandle komngcele wendlela ethile noma izwe ukuthi akwazi ukuqeda umsebenzi wesu Lakhe. Isibonelo, uma uNkulunkulu aphenduka waba yinyama eJudiya, injongo Yakhe kwakukwenza umsebenzi wokuqothula ukuze ahlenge isintu. Kodwa amaJuda ayekholelwa ukuthi ngeke ayenze leyo nto uNkulunkulu, futhi acabanga ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu angaba yinyama abe nguJuda iNkosi uJesu. “Okungenakwenzeka” kwabo kwaba isisekelo sokuthi bajezise futhi baphikisane noNkulunkulu, futhi ekugcineni kwaholela ekumoshakaleni kwe-Israyeli. Namuhla, abantu abaningi benze iphutha elifanayo. Bafuna ukwamukela ukubonakala kukaNkulunkulu, kodwa futhi bajezisa ukubonakala kwakhe; “okungenakwenzeka” kwabo futhi kubamba ukubonakala kukaNkulunkulu emikhawulweni yemicabango yabo. Futhi ngibone abantu abaningi behleka bewa abawahleka usulu amazwi kaNkulunkulu. Ingabe lokhu kuhleka akuhlukile yini ekujeziseni kanye nokuthukana kwamaJuda? Awuhlukanga ekuqondaneni neqiniso, futhi uyalifuna iqiniso. Ufunda njengempumputhe futhi awuzinaki izinto. Uzozuzani ngokufunda kanye nokulinda kanje? Ungazithola yini iziqondiso zikaNkulunkulu?
Kucashunwe “Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele ube nokukholwa kuwo wonke amazwi kaNkulunkulu nakuwo wonke umsebenzi Wakhe. Okusho ukuthi, njengoba ukholwa kuNkulunkulu, kufanele umlalele. Uma ungakwazi ukwenza lokhu, akusho lutho ukuthi uyakholwa kuNkulunkulu noma cha. Uma usukholwe kuNkulunkulu iminyaka eminingi, kodwa ungakaze umlalele noma wemukele wonke amazwi Akhe, kodwa kunalokho ucele uNkulunkulu ukuthi athobele wena futhi alandele imicabango yakho, ngakho uhlubuke ukudlula bonke, futhi awukholwa. Umuntu onjena angakwazi kanjani ukulalela umsebenzi namazwi kaNkulunkulu angahambisani nemicabango yomuntu? Umuntu oyihlongandlebe kunabo bonke umuntu oweyisa futhi amelane noNkulunkulu ngenhloso. Uyisitha sikaNkulunkulu futhi ungumphikikristu. Umuntu onjalo ugcina umoya wobutha njalo mayelana nomsebenzi omusha kaNkulunkulu, akaze akhombise nencane inhloso yokuzithoba, futhi akakaze alalele noma azehlise noma azithobe. Uyazikhukhumeza phambi kwabanye kanti akazithobi nhlobo komunye. Phambi kukaNkulunkulu uzibona enguchwepheshe ekushumayeleni izwi futhi enekhono kakhulu ekusebenzeni kwabanye. Akalingi alahle “amagugu” asenawo, kodwa uwathatha njengezinto zomndeni eziyigugu ezivela kokhokho okufanele zikhonzwe, kushunyayelwe ngazo kwabanye, futhi usebenzisa ukufundisa lezo ziphukuphuku ezimthanda kakhulu. Impela bakhona abantu abanje ebandleni. Kungashiwo ukuthi “bangamaqhawe angenakunqotshwa,” isizukulwane emuva kwesizukulwane bayavakasha endlini kaNkulunkulu. Bacabanga ukuthi ukushumayela izwi (imfundiso) kungumsebenzi wabo osemqoka. Unyaka nonyaka, isizukulwane emuva kwesinye, bawenza ngomdlandla umsebenzi wabo “ocwebileyo nongaphiliseki”. Abekho abalinga ukubathinta futhi abekho abalinga ukuthi babasole obala. Baphenduka “amakhosi” endlini kaNkulunkulu, bephithizela ngenkathi bebusa phezu kwabanye iminyaka ngeminyaka. Leli qulu lamadimoni lifuna ukuhlangana bese ndawonye alibhidlize umsebenzi Wami; ngingabavumela kanjani labo develi abaphilayo babe khona phambi kwamehlo Ami?
Kucashunwe “Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Abantu abaningi abaphikisani yini noNkulunkulu futhi bavimbe umsebenzi woMoya oNgcwele ngoba bengazi umsebenzi kaNkulunkulu onhlobonhlobo futhi ohlukahlukene, ngaphezu kwalokho, banengcosana yolwazi nemfundiso abakala ngayo umsebenzi woMoya oNgcwele? Nakuba abadlule kukho laba bantu kukha phezulu, bayaqhosha futhi bathanda ukuzitika ngokwemvelo, futhi babuka umsebenzi woMoya oNgcwele ngokudelela bashaya indiva ukuqondisa koMoya oNgcwele futhi, ngaphezu kwalokho, basebenzisa izinkulumo zabo ezindala neziyize ukuqinisekisa umsebenzi woMoya oNgcwele. Bayazenzisa, futhi banelisekile ngokuphelele ngolwazi lwabo uqobo kanye nokufunda kwabo, nokuthi bayakwazi ukuhamba banqamule umhlaba. Abantu abanjalo akubona labo abazondwayo futhi abalahlwe uMoya oNgcwele futhi ngeke yini bakhishwe yinkathi entsha? Akubona labo abeza phambi kukaNkulunkulu bamphikise imbaba abantu abancinyane ababona eduze kuphela, abazama ukumane bakhombise ukuthi bahlakaniphe kangakanani? Ngolwazi oluwubala lweBhayibheli, bazama ukugxamalaza “imikhakha yezemfundo” yomhlaba, benemfundiso ekha phezulu nje abayifundisa abantu, bazama ukuphindisela emuva umsebenzi woMoya oNgcwele, futhi bazame ukuwenza uzungeze lapho inqubo yabo yokucabanga ikhona, futhi, njengoba benokubukela eduze nje, bazama ukujeqeza kanye nje umsebenzi kaNkulunkulu weminyaka eyizi-6,000. Laba bantu abanaso isizathu abangakhuluma ngaso! Empeleni, lapho ulwazi lwabantu lulukhulu ngoNkulunkulu, yilapho bephuza ukwahlulela umsebenzi Wakhe. Ngaphezu kwalokho, bakhuluma kancane kuphela ngomsebenzi kaNkulunkulu namuhla, kodwa abanawo amawala ekwahluleleni kwabo. Lapho kukuncane abantu abakwaziyo ngoNkulunkulu, yilapho beqhosha khona futhi benokuzethemba okweqile, futhi yilapho bememezela ngokungabi namahloni okukhulu ubukhona bukaNkulunkulu—kepha bakhuluma okucatshangwayo nje kuphela, futhi abalethi ubufakazi bangempela. Abantu abanjalo abalusizo kwalutho. Labo ababona umsebenzi woMoya oNgcwele njengomdlalo abanangqondo! Labo abangaqapheli uma behlangabezana nomsebenzi omusha woMoya oNgcwele, abakhuluma noma ikanjani nje, abasheshayo ukwehlulela, abavumela isazela sabo semvelo ukuphika ukulunga komsebenzi woMoya oNgcwele, nabaphinde badelele futhi bawuhlambalaze—abantu abangahloniphi kanjalo anganalwazi ngomsebenzi woMoya oNgcwele na? Akubona, ngaphezu kwalokho, labo bokuqhosha, abaziqhenyayo ngokwemvelo, futhi abangaphatheki? Noma ngabe usuku luyafika lapho abantu abanjalo bemukela umsebenzi omusha woMoya oNgcwele, nakalokhu, uNkulunkulu ngeke ababekezelele. Ababukeli phansi labo abasebenzela uNkulunkulu nje kuphela, kodwa bahlambalaza uNkulunkulu Uqobo Lwakhe. Abantu abanobuwula kanje ngeke baxolelwe, noma kulenkathi noma enkathini ezayo futhi bayobhubha ingunaphakade esihogweni! Abantu abanjalo, abangahloniphi, abathanda ukuzitika bayazenzisa ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu, futhi lapho beqhubeka nokwenze njalo, yilapho bengazithola bephula izinqumo zikaNkulunkulu zokuphatha. Akuve bonke labo abaqhoshayo, abangalawuliwe ngokwemvelo, futhi abangakaze bahloniphe muntu, bonke behamba le ndlela? Abaphikisani noNkulunkulu usuku nosuku, Yena ohlala emusha futhi engagugi?
Kucashunwe “Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Noma obani ongayiqondi inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu yilowo omelana noNkulunkulu, nakakhulu lowo owaziyo ngenhloso yomsebenzi kaNkulunkulu kepha angafuni ukwanelisa uNkulunkulu. Labo abafunda iBhayibheli emasontweni amakhulu, kepha akekho noyedwa oqondayo inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu. Akekho noyedwa okwazi ukwazi uNkulunkulu; ngaphezu kwalokho, akekho noyedwa ovumelana nenhliziyo kaNkulunkulu. Bonke bangabantu abangenamsebenzi, abanyanyekayo, ngamunye bamile phezulu ukufundisa uNkulunkulu. Nakuba belibiza igama likaNkulunkulu, bamelana Naye ngenhloso. Nakuba bezibiza ngokwabo ukuthi bangamakholwa kaNkulunkulu, bayilabo abadla inyama futhi baphuze igazi lomuntu. Bonke abantu abanjalo bangoSathane abadla umphefumulo womuntu, amadimoni amakhulu aphazamisa ngenhloso labo abazama ukungena endleleni efanele, nezikhubekiso ezikhinyabeza indlela yalabo abafuna uNkulunkulu. Nakuba “bephile qingqo,” abalandeli babo bangazi kanjani ukuthi bangabaphikiKristu abaholela abantu ekuphikisaneni noNkulunkulu? Bangazi kanjani ukuthi bangamadimoni aphilayo afuna imiphefumulo azoyidla?
Kucashunwe “Bonke Abantu Abangamazi UNkulunkulu Bangabantu Abaphikisana NoNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Niyafisa ukwazi umsuka wokuthi kungani abaFarisi babephikisana noJesu? Niyafisa ukwazi ubunjalo babaFarisi? Babegcwele imicabango ngoMesiya. Okungaphezulu, ukuthi babekholwa ukuthi uMesiya uyofika, kodwa abafunanga iqiniso lokuphila. Ngakho, nanamuhla, basalindele uMesiya, ngokuba abanalwazi ngendlela yokuphila, futhi abazi ukuthi iyiphi indlela yeqiniso. Kungenzeka kanjani, kusho nina, ukuthi abantu abayiziwula, abanenkani futhi abangazi njengalaba bazuze isibusiso sikaNkulunkulu? Babengambheka kanjani uMesiya? Baphikisana noJesu ngoba babengayazi indlela yomsebenzi kaMoya oNgcwele, ngoba babengayazi indlela yeqiniso eyakhulunywa uJesu, okunye futhi, ingoba babengamqondi uMesiya. Futhi njengoba babengakaze bambone uMesiya, futhi bengakaze bahlalisane noMesiya, benza iphutha lokuba nokuhlonipha igama likaMesiya okuyize kulapho bephikisana nobunjalo bukaMesiya nanoma ingayiphi indlela. Laba baFarisi ngobunjalo babo babenenkani, bezikhukhumeza, futhi bengalilaleli iqiniso. Umgomo wenkolo yabo kuNkulunkulu uthi: Noma intshumayelo Yakho inomqondo kangakanani, noma ngabe igunya Lakho liphezulu kangakanani, awusiye uKristu, ngaphandle uma ubizwa ngoMesiya. Ayive le mibono ingezwakali futhi ingenangqondo na? Ngiyabuza futhi: Akulula kakhulu na kinina ukuthi nenze amaphutha abaFarisi basekuqaleni, njengoba ningenakho nokuncane ukuqonda ngoJesu? Niyakwazi yini ukubona indlela yeqiniso? Ningaqinisekisa ukuthi ngeke nimelane noKristu? Niyakwazi yini ukulandela umsebenzi kaMoya oNgcwele? Uma ungazi noma uyomphikisa yini uKristu, ngithi vele usuphila engcupheni yokufa. Labo ababengamazi uMesiya babekwazi ukuphikisana noJesu, noma bamdikile uJesu, noma bamhlebe. Bonke abantu abangamqondi uJesu bangakwazi ukumphika, futhi bamthuke. Ikakhulukazi, bangakwazi ukubona ukubuya kukaJesu njengenkohliso kaSathane, futhi abantu abaningi bazomehlulela uJesu obuyele enyameni. Akukusabisi yini konke lokhu? Lokhu oyobhekana nakho ukuhlambalaza uMoya oNgcwele, ukona amazwi kaMoya oNgcwele emabandleni, nokulahla konke okwabonakaliswa uJesu. Ungazuzani kuJesu uma udideke kangaka? Ningawuqonda kanjani umsebenzi kaJesu uma ebuya enyameni ngefu elimhlophe, uma ninqaba ngenkani ukubona amaphutha enu? Nginitshela lokhu: abantu abangalamukeli iqiniso, nokho, ngobumpumputhe balindele ukufika kukaJesu ngamafu amhlophe, ngokuqinisekileyo bayohlambalaza uMoya oNgcwele, futhi bayisigaba esiyobhujiswa. Nimane nifisa umusa kaJesu, futhi nimane nifuna ukuthokozela umkhathi wasezulwini onentokozo, kepha anikaze niwalalele amazwi akhulunywa uJesu, futhi anikaze nilamukele iqiniso elakhulunywa uJesu uma Ebuya enyameni. Yini oyoyiphakamisela ukubuya kukaJesu ngefu elimhlophe? Ubuqotho enenza ngabo izono niphindelela bese niyazivuma, njalo njalo? Yini oyoyenza ibe umnikelo kuJesu Kristu uma ebuya ngefu elimhlophe? Ingabe iminyaka yokusebenza eniziphakamisa ngayo? Yini oyoyiphakamisa ukuze uJesu osebuyile akwethembe? Ingabe imvelo yakho yokuzikhukhumeza, engalilaleli nanoma iliphi iqiniso?
Kucashunwe “Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Amademoni nemimoya emibi bekulokhu kuvuke umbhejazane emhlabeni futhi kuvimbe intando kanye nemizamo kaNkulunkulu, kwenza izinto zaba nzima. Yisono esikhulu leso! Angahlala kanjani angakhathazeki uNkulunkulu? Angahlala kanjani engabi nolaka uNkulunkulu? Awuphazamisa kakhulu futhi amelene nomsebenzi kaNkulunkulu. Izihlubuki ezinkulu! Ngisho nalawo mademoni, amakhulu namancane, anamandla amakhulu futhi angodeveli abanamandla aqala ukungenwa itwetwe. Alenqabe ngamabomu iqiniso, naphezu kokucaca kwalo. Amadodana okuhlubuka! Kunjengokungathi, manje njengoba inkosi yesihogo yehlele esihlalweni sobukhosi, ayiziqhwaga ezihlukumeza abanye. Mangaki afuna iqiniso nalandela ukulunga? Onke ayizilwane njengezingulube nezinja, ahola iqembu lezinambuzane odakeni ukuze amakhanda azo asangane bese esusa uthuthuva. Akholelwa ukuthi inkosi yawo yesihogo inkulu kunawo wonke amakhosi, awaboni ukuthi awazidluli ngalutho izimpukane ezibhuza ekudleni okubolile. Akukhona nje lokho kuphela, akunyundela ngonya ukuba khona kukaNkulunkulu ngokuncika kubazali bawo abayizingulube nezinja. Izimpukane ezincane zicabanga ukuthi abazali bazo bakhulu njengomkhoma onamazinyo. Aziboni yini ukuthi zincane, kodwa abazali bazo bayizingulube nezinja ezingcole izikhathi eziyizigidigi ukwedlula zona? Zingakuboni ukuba phansi kwazo, ziyatshakadula nephunga lalezo zingulube nezinja futhi ziyazikhohlisa ngekusasa lezizukulwane ezizayo. Lokho kushayisa amahloni! Anezimpiko eziluhlaza emhlane (lapha kukhulunywa ngokusho kwawo ukuthi akholelwa kuNkulunkulu), aqala ukukhohliseka futhi ahambe ezishaya isifuba ngobuhle bawo, efaka ngesinyelela ukungcola kumuntu. Ayizigelekeqe, njengokungathi amaphiko amabili othingo lwenkosazane amibalabala anokungcola, ngakho ahlasela ukuba khona kukaNkulunkulu weqiniso (lapha kukhulunywa ngesimo sangaphakathi sezinkolo zomhlaba). Kuncane umuntu akwaziyo ngalokho, nakuba amaphiko empukane emahle, awahluke ndawo namaphiko empukane encane egcwele ukungcola namagciwane. Emandleni ezingulube nezinja zabo zabazali, avuka umbhejane ngaphesheya kwezwe (lana kukhulunywa ngezikhulu zenkolo ezishushisa uNkulunkulu ngenxa yokwesekwa kakhulu yizwe zikhaphele uNkulunkulu weqiniso neqiniso) ngamanga axakile. Kunjengokungathi izipoki zabaFarisi abangamaJuda zibuyele kuNkulunkulu ezweni likadrako omkhulu obomvu, esidlekeni sawo sakudala. Aphinde aqala umsebenzi wawo wokushushisa, aqhubeka nomsebenzi wawo wezinkulungwane zeminyaka. Leli qembu elibolile nakanjani lizogcina libhujisiwe emhlabeni! Kubonakala sengathi ngemva kwezinkulungwane eziningi zeminyaka, imimoya engcolile isingabakhohlisi namaqili kakhudlwana. Ihlale icabanga ngezindlela zokuwudicilela phansi ngobukhoshosho umsebenzi kaNkulunkulu. Eminyakeni eyizinkulungwane eziningi edlule ibilokhu ifuna ukuphamba nokukhohlisa abantu ezweni. Lokhu kwacishe kwamthukuthelisa kakhulu uNkulunkulu waletha isililo, kunzima ukuthi azithibe ekubuyeni ezulwini lesithathu ukuze abaqothule.
Kucashunwe “Umsebenzi Nokungena (7)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
1. “Ukususa uthuthuva” kubhekise endleleni abantu abanamademoni abasusa ngayo isiphithiphithi, bavimbele futhi bamelane nomsebenzi kaNkulunkulu.
2. “Umkhoma onamazinyo” kusetshenziselwa ukuhlekisa. Kungumfanekiso wendlela izimpukane ezincane ngayo ngangokuba izingulube nezinja zibonakala zizinkulu njengemikhoma kuzo.
Okwedlule： Kungani iNkosi UJesu eqalekisa AbaFarisi? Yini ngempela umongo WobuFarisi?
Okulandelayo： Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?
Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokhu?
3. Yini sonke isigaba esisha somsebenzi kaNkulunkulu sibhekana nokudelelwa ngamandla kanye nokulahlwa yizwe lezenkolo? Yini imbangela eyisisusa salokh…
4. Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo …
2. Umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina ukwahlulela kwesihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe, njengalokhu kuphrofethiwe eNcwadini…
3. IBhayibheli laqokelelwa ngumuntu, hhayi uNkulunkulu; iBhayibheli alikwazi ukumela uNkulunkulu Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Hlolani imibhalo; ng…
Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?
Emhlabeni wezenkolo, yiqiniso noNkulunkulu abaphethe Amandla, noma ingabe omphikukristu noSathane abaphethe amandla?